Arin mucjiso ah oo ka dhacday dalka ugaandha oo ka yaabisay malaayiin qof oo aqristay sheekada | Xaqiiqonews
Arin mucjiso ah oo ka dhacday dalka ugaandha oo ka yaabisay malaayiin qof oo aqristay sheekada
Sanadkii 1994 ergo ka socday wadanka jabaan ayaa booqasha ku tagay tuulooyin badan oo ku yaaalo africa ujeedada ayaa aheyd in daraasad lagu sameeyo dhaqamada iyo caadooyinka qabaa,ilka halkaas dagan.
Muddo 4 bilood ah oo booqashadu ku socotay si caadi ah aya waxa dhacday arin fajac iyo yaaab ku noqotay wafdikii jabaanka ahaa.
Dhacdada ayaa aheyd markii ay booqdeen tuulo ku taalo wadanka yugaandha oo ay daganaayeen qabiil lagu magcaabo”toogumuuluu” qabiilkan ayaa noolashoodu si caadi ah u socotay laakin dhaqankooda ayaa ahaa mid cajiib ah oo yaab ku keenay ergada.
Arimaha aad kaga yaabiyey ergada waxaa ka mid ahaa markii mid ka mid ah ergadii ay damacday in jab xalwo ah siiso gabar yar oo ka mid ah dadka deegaanka oo ooyneysay laakin gabartii ayaa u dhaqantay sida iyada oo aan arkeeynin xalwada la siiyey, waxayna sii wadatay oohinteeda arintaasi oo ka yaabisay xubnahii la socday ergada.
Muddo maalmo ah oo ergada ay joogeen tuulada waxa ay u gudbeen tuuladii xigtay halkaas oo ay kula kulmeen madaxii tuulada oo ay u sheegeen waxyaabihii ay soo arkeen laakin hogaamiyihii ayaa u sheegay in qabiilka “toogumuuluu” aysan cidnaba ka nooleen oo ay mar hore dhinteen dhamaantood muddo 2 sano la joogo markii uu ku dhacay cudur saf mar ah .
Dhacdadan ayaa noqotay tii ugu yaabka badneed oo ay ergada la kulmaan waxa ayna ka sheekeeyeen arintan markii ay jabaan ku laabteen